आश्विन २१, २०७४ सुशील पौडेल
नक्कली पतिका रूपमा आईईएलटीएसमा गतिलो नम्बर ल्याएको प्रज्वल (स्वरूप) भेटिन्छ । प्रज्वल पनि पैसा नभएर अस्ट्रेलिया जान सकिरहेको हुँदैन । दुवैको स्वार्थ मिल्छ । तर त्यसपछि घटनाक्रम भने उनीहरू अनुकूल हुँदैनन् र एकपछि अर्को झमेलामा फस्दै जान्छन् ।
प्रकाशित : आश्विन २१, २०७४ १०:२१
अलेक्जेन्डर एस्त्रक नाम गरेका एक चिन्तकले सन् १९४८ मा लेखेको एक लेखले विश्व सिनेमा जगत्मा तरंग फैलायो । उनले त्यो लेखमा सिनेमा भन्ने माध्यम एउटा विशुद्ध कलाको रूपमा अवतरण गर्दै गरेको उद्घोष गरिदिए र कलमले किताब लेखेजस्तै क्यामराले लेख्ने सिर्जना सिनेमा हो भनिदिए । लेखको शीर्षक थियो— नयाँ कलाको जन्म, क्यामरा कलमको रूपमा ।
सिनेमा जन्मिदा, एउटा जादुको स्वरूपमा जन्मेको थियो । पर्दामा चल्मलाइरहेका देखिने साँच्चिकै मान्छेका आकृतिहरू, गुडिरहेको रेल, दौडिरहेका कुकुरहरू— एउटा गजबको इन्द्रजालजस्तो थियो । मान्छेहरू यो जादु देखेर तीनछक परे र सिनेमाका ठेकेदारहरूले मदारीले बाँदर नचाएझैं सिनेमालाई नचाउँदै हिँडे, सभ्यता बास बसेका कुना कन्दराहरूमा । तर जादु कति समय टिक्थ्यो र ? जब मान्छेहरूले सिनेमाको स्वभावलाई सामान्यीकरण गर्न लागे सिनेमाको ओज
भँड्खालोमा पर्न थाली गो । सिनेमाको दु:खी भविष्यको संकेत त यसको जन्मदाता लुमियेर बन्धुले उतिबेला नै गरिसकेका थिए । उनीहरू भन्थे— सिनेमा यस्तो आविष्कार हो जसको कुनै भविष्य नै छैन ।
२० वर्ष उमेर पुग्दा नपुग्दै, आफ्ना ओजहरू निभाएर मसानतिर पुग्न लागेको सिनेमा अचानक सल्बलाएर आयो । आफ्नै जन्मदाताहरूको भविष्यवाणीलाई लोप्पा खुवाएर सिनेमा संसारभरिका मान्छेहरू लठ्ठयाउँदै २०औं शताब्दीको सबैभन्दा लोकप्रिय माल पो बनिदियो । यसो हुनुमा एउटा काइदाले काम गरेको थियो— ग्रिफिथ नाम गरेका एक अमेरिकीले सिनेमालाई एक काइदा सिकाएर गए— कथा भन्ने काइदा ।
त्यसै बेलाको छेको पारेर एस्त्रकले लेखे— सिनेमा एउटा कलाको स्वरूप हो र हुनुपर्छ्र यो संगीत, पेन्टिङ वा काव्यजस्तै आफ्नै कोड्स र कन्भेन्सन्सका सौन्दर्य बोकेर छिट्टै एउटा विशुद्ध कलाको रूपमा अवतरण हुँदै छ । फ्रान्समा उतिबेला कला र संस्कृतिको गम्भीर उत्खननको लहर चलेको थियो । केही जोसिला युवाहरूले सिनेमाको मियो समाते र सिनेमालाई केही भन्न थाले, ‘सिनेमालाई केही भन्नु छ’ भन्ने पत्रिकामार्फत । उनीहरूले किताब सारेर कनीकुथी कथा भन्ने सिनेमाहरूलाई भयंकर गाली गरे । सिनेमाको स्वभावको कुरा गरे र सम्भावनाहरूको वकालत गरे । उनीहरूको सामूहिक प्रयास सिनेमालाई एउटा स्वतन्त्र कलाको रूपमा व्याख्या गर्ने चेतनाले भरिएको थियो । उनीहरूले चर्का–चर्का भावहरूमा धेरै वर्ष लेखे । सिनेमा साँच्चै कलाको रूप हो भने यसको एक सर्जक हुनुपर्छ भन्ने बहस सुरु भयो र उनीहरूले निर्देशकलाई सिनेमाको अथरको रूपमा मान्ने निक्र्योल गरे । कविताको कविजस्तै, संगीत सर्जकजस्तै, किताबको लेखकजस्तै, सिनेमाको अथरचाहिँ निर्देशक हो है भन्ने मान्यतालाई संसार घुमाएर हेरे ।
नवलहरको अभियान फरक सिनेमा बनाउने एउटा मुढे लहड मात्रै थिएन । बरु सम्पूर्ण सिनेमाको स्वरूप र संस्कृतिलाई फरक रूपमा व्याख्या गर्ने सचेत अभियान थियो । हुन त सिनेमालाई विशुद्ध सिर्जनाको रूपमा प्रस्तुत गर्ने प्रयास थुप्रै सर्जकहरूले त्योभन्दा अघि र त्यही समयमा पनि गरिरहेथे । सिनेमाको
आफ्नो अस्तित्व खोज्न सामूहिक झट्का दिने अभियान भने फ्रान्सको नवलहरको अभियान नै थियो ।
फ्रान्सको नवलहरको तरंगले संसार तरंगित हुँदै गर्दा, हीरासिंग खत्री पोको पुन्तुरो कसेर राजाको निगाहाले धन्य हँुदै नेपाल आउने सुर गर्दै हुँदा हुन् । पञ्चायती शासन प्रणालीलाई मालिस गर्न भनी सुरु भएको नेपाली सिनेमाको इतिहास आधारमै कमजोर थियो । त्यसमाथि भारतीय सिनेमाले थुपारेको अतिरञ्जित मेलोड्रामामा हाम्रो सिनेमा चेत अड्किएको थियो । त्यसपछि जे जति सिनेमाहरू बने भारतीय मूलधारका सूत्रहरूलाई पछयाएर मान्छेहरूलाई भुलाउने घिसिपिटी सिनेमाको संस्कारको निरन्तरता मात्र रह्यो । हाम्रो भाषामा पनि सिनेमा छन् है भन्नेबाहेक ती सेलुलोइडका स्ट्रिपहरूले कुनै तात्त्विक उपलब्धि दिन सकेनन् । प्रकाश थापा हँुदै तुलसी घिमिरेको जुगसम्म आइपुग्दा बिस्तारै कथानकता र भावनाको गहिराइ त खोजियो तर त्यसको आधारशिला सम्पूर्ण रूपमा भारतीय सूत्रबद्ध चलचित्रमा निहित थियो । भारतीय मूलधार जता–जता बग्यो उतै–उतै, बचेराले माउको पिछा गरेझैं नेपाली सिनेमा, ‘जसो–जसो बाहुन बाजे उसै–उसै स्वाहा’ गर्न अभ्यस्त रह्यो । विकृत संस्कृतिलाई काँध थापेर हिँडेको दूतजस्तो । सिनेमाको संस्कृति सम्मानित संस्कृति बन्न सकेन । रासलीला मच्चाउने ठेकेदारहरूको विरासतजस्तो, स्तरहीन नौटंकी गर्ने मुस्तन्डेहरूको अखडाजस्तो, सिनेमा जगत्मा लाग्नेहरू समाजका हेयका पात्र बने ।
वर्षौंसम्म कनीकुथी सूत्रीय कथा भन्न पनि नसकिरहेको हाम्रो सिनेमा जगत्मा काव्यिक वा कला चेतनाको संस्कृति छिर्नु त्यति सजिलो कुरा रहेन । सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा त हाम्रो समाजको चेतना कुन गहिराइमा छ भन्ने कुरा रहेछ । भौतिकताको अभावमा भौतिक भोकको ताडनाले पीडित हाम्रो समाज, भाषा संस्कृति, कला अध्यात्मका मूल्यहरू नजरअन्दाज गर्न लागिसक्यो । अंग्रेजी ठेलीहरूको सुगारटाइ गर्दै, ओठमाथि जुँगाका मसिना रेखीहरू भर्भराउन नपाउँदै बुर्कुसी मारेर गोराहरू बास बसेको भूगोलमा भाग्य खोज्ने सपना देख्ने आजको नयाँ पुस्ता सांस्कृतिक रूपमा विचलित छजस्तो लाग्छ । आफ्नै अस्तित्वका अवशेषहरूलाई हेयको भावले हेर्ने नयाँ पुस्ता, अरूको संस्कृतिको अनुयायी बन्छ र आफू गलत भूगोलमा जन्मेकोमा खेद प्रकट गर्छ । ग्लोबलाइजेसनको युगमा एक व्यक्ति विश्वको नागरिक बन्ने अभियानमा आफ्नो ज्ञान र व्यक्तित्वको क्षितिजलाई फराकिलो पार्न पक्कै पर्छ तर यो यात्रामा लाग्दै गर्दा आफ्नो भाषा, संस्कृति र मूल्य मान्यताहरूलाई घृणा गरेर संसार जित्न निक्लेको मान्छे भौतिक विलासिताले त पुरिएला तर ऊभित्रको आत्माले संसारको कुन कुनामा पुगेर शान्ति भेट्ला ? कतै हाम्रा प्रतिष्ठानहरूले नयाँ पुस्तालाई ग्लोबलाइजेसन नराम्रो तरिकाले त सिकाइरहेका छैनन् ?
५ दशकको लामो इतिहासमा केही गम्भीर प्रयासहरू पक्कै भए तर ती प्रयासहरू बतासजस्तै आए, बतासजस्तै गए । ४० को दशकमा साहित्यका रागहरू सिनेमामा छिराउने फुटकर प्रयासहरू भएका हुन् तर एडप्टेसन कलामा चुक्दा र हेर्ने दर्शकहरू नपाउँदा यी सिनेमाहरूले चिरकालका प्रभाव छाड्न सकेनन् । सिनेमा आफ्नै सूत्रहरू बोकेर हिँडिरह्यो । ५० को दशकमा ‘मुकुण्डो’ र ‘नुमाफुंग’ जस्ता मौलिक र गम्भीर सिनेमा बनाउने प्रयासहरू भए । तर सूत्रबद्ध सिनेमा संस्कृतिले छोपेको बजारमा यिनीहरूले न्याय पाएनन् र मौलिक सिनेमा संस्कृतिले निरन्तरता पाउन सकेन । केही सर्जकहरूले चलिआएको सूत्रको फराकिलो मैदानमा आफूलाई सेफ ल्यान्डिङ गराउने कोसिस गरे । आफ्नो अडानमा बसिरहने नवीन सुब्बाजस्ता सर्जकलाई दोस्रो सिनेमा बनाउन दुई दशक लागिरहेछ । सम्झी ल्याउँदा यो नेपाली सिनेमाको मन दुख्ने दृष्टान्त हो ।
विगतका केही वर्षहरूदेखि नेपाली सिनेमाले अन्तर्राष्ट्रिय सिनेमा महोत्सवहरूमा उपस्थिति देखाइरहेछ । ‘कालो पोथी’ र ‘सेतो सूर्य’ जस्ता सिनेमाहरू नेपालको प्रतिनिधित्व गर्दै संसार घुमेका छन् । ठूला महोस्त्सवहरूमा पुरस्कार जितेका छन् । विश्व सिने जगत्ले नेपाली सिनेमाको झंकारलाई गहिरिएर हेर्न खोज्दै छ । अन्तर्राष्ट्रिय फन्डका लागि प्रयास गर्नु, महोत्सवहरूमा छनोट हुने प्रयास गर्नु एउटा संस्कार जसरी विकास हँुदै छ । नेपाली सिनेमा अन्तर्राष्ट्रिय भेन्चरमा निक्लनु हाम्रा लागि क्रान्तिकारी कदम पक्कै नै हो तर यो यात्राका केही नमीठा पाटाहरू छन् जस्तो कि : विदेशी दातृ निकायहरूका स्वार्थमा उनीहरूले धेरै ठाउँमा अंकुश हालेर उनीहरूले हेर्न खोजेजस्तो सिनेमा मात्र बनाइरहँदा हाम्रो सिनेमाको स्वरूप पश्चिमी हेजिमोनीले खर्लप्पै खाइदिने त हैन ? विदेशी सम्भ्रान्तहरूले आफ्नो मानसिकताबाट हेर्न खोजेको समाजको तस्बिर बन्दै जाँदा हाम्रो आफ्नो वास्तविक तस्बिरचाहिँ सधैं पर्दाबाहिरै रहने पो हो कि ?
अन्तर्राष्ट्रिय वृत्तमा निर्माता, वितरक र सेल्स एजेन्टहरू महोत्सव वृत्तलाई सर्लक्कै छोपेका छन् । सिन्डिकेटजस्तो संस्कार विकास भएको छ र महोत्सवहरू कर्पोरेट हाउसमा रूपान्तरण हँुदै छन् । यो सिन्डिकेटलाई तोडेर एउटा स्वतन्त्र सिनेमा सर्जक ठूला महोत्सहरूमा सहभगी हुन धेरै गाह्रो छ । नयाँ पुस्ताका थुप्रै सिने सर्जकहरू यही घानमा पिसिएका छन् । थुप्रैको बीचबाट, दीपक रौनियार र मीनबहादुर भामले दिलाएको सफलता धेरै महत्त्वपूर्ण छ । कस्ता विषयमा कुन शैलीले बनेका सिनेमाहरू अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा स्वीकार गरिन्छन् भन्ने उदाहरण नेपाली दर्शकमाझ पेस गर्न सफल भएका छन् । नेपाली सिने साक्षरता बढाउन यी सिनेमाहरूको ठूलो भूमिका छ । तर नेपाली नवलहरको प्रतिनिधित्व गर्न भने यी पुरस्कृत सिनेमाहरू केही कोणबाट चुकेका छन् ।
सिनेमाको स्वरूप परिवर्तन हुन सबैभन्दा पहिले आफ्नै देशमा एउटा सिनेफिलियाको आवश्यकता छ । विदेशीको निगाहामा सिनेमा बन्ने परम्परालाई तिरस्कार गरेर हाम्रा सिनेमाको जग हाम्रै देशमा खोज्न जरुरी छ । कला, साहित्य, संगीतका अनुरागीहरूलाई सिनेमाको स्वाद चखाउन सकियो भने विश्वविद्यालयमा जीवन र समाजका विविध आयामहरूको डिस्कोर्समा व्यस्त नयाँ पुस्तालाई सिनेमा संस्कृतिसँग जोड्न सकियो भने सिनेमा कलाले एउटा राम्रो सिनेफिलिया भेट्दो हो । बौद्धिक वर्गले सिनेमा हेर्ने बानी बसाले भने मात्र सिनेमाभित्र पनि गम्भीर बौद्धिकताको छाप लाग्न सक्ने थियो । सिनेमा नहेर्ने वर्गलाई सिनेमा हेर्ने बनाउन एउटा अभियानजस्तो छेड्नुपरेको छ । त्यसका लागि वैकल्पिक सिनेमा प्रदर्शनको संस्कृति सुरु हुन जरुरी छ । बजारिया मालको रूपमा सिनेमालाई ग्रहण गर्ने अहिलेका सिनेमा थिएटरहरूले नवलहरको भावना बोक्न सक्ने छैनन् । ठूला–ठूला स्वचालित भर्‍याङहरू चढेर, पुँजीवादी पपकर्न चपाउँदै, रंगीचंगी सिनेमा हेरिने संस्कारभन्दा फरक, सिनेमाभित्रका गम्भीर कला साधनाका शैलीहरूका आनन्द लिन फरक सिनेफिलहरूलाई फरक थिएटरहरूमा गोलबद्ध गर्न जरुरी छ । त्यसो गर्दा सिनेमाको प्रचार प्रसार, हलवाला र वितरकहरूको प्रभावबाट मुक्त भएर आफ्ना फरक सिनेमाहरू फरक दर्शकहरूमाझ सीधै पुग्ने संस्कारको विकास हुन पुग्छ । बजारिया कमोडिटी जसरी सिनेमालाई बेच्नुपर्ने बाध्यताबाट पनि सिनेमा मुक्त हुन सक्छ । कम बजेटमा नै बन्न सक्ने सदावहार सिनेमाहरूले आफ्नो लगानी उठाउन धेरै पापड बेलिरहनुपर्ने छैन र निरन्तर सिनेमा बन्न सक्ने संस्कृतिको विकास हुन सक्छ । युरोपतिर चर्चित बनेका सिनेमा थेग र रिभैबल थिएटरहरूलाई दृष्टान्त लिन सकिन्छ ।
सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा, सिनेमाका सर्जकहरू नै जन्मनु छ । सूत्रहरू, प्रभावका भारीहरूबाट मुक्त भित्री चैतन्यले जागेको र सिनेमा संस्कृतिसँग जीवन जोडिरहेका केही सर्जकहरू जसले सिनेमा भन्ने माध्यमलाई गम्भीर कला–साधनाको माध्यमको रूपमाग्रहण गरोस् ।
भौतिकताको लेपनले निलेको हाम्रोबोधो मनोविज्ञानले नयाँ पुस्तालाई कलाचेतना वाहियात डिस्कोर्स भनेर सिकाउँदै छ किनकि यताबाट मनग्गे आम्दानी हँुदैन ।
तैपनि आफ्ना अभिव्यक्तिका माध्यमहरूखोज्दै केही हूल सिनेमाका विद्यार्थीहरूकतै साँघुरा कक्षाहरूमा, चियापसलका अँध्यारा बेन्चहरूमा अथवा नगरबसका अन्तिम सिटहरूमा सबैतिर सिनेमा चैतन्यका सपनाहरू बाँडिरहँदा, लाग्छ अब छिट्टै हाम्रो देशमा सिनेमाको नवलहर आउँदै छ ।